Texas ပြည် Houstonမြို့မှာ COVID ကူးစက်ခံရသူတဦးကို ဆေးရုံပို့နေစဉ်
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က တရက်အတွင်း COVID-19 အကူးစက်ခံရသူ အရေအတွက် တသိန်းခွဲနီးပါး (၁၄၄,ဝဝဝ) ဖြစ်လာပြီး စံချိန်တင်သွားပါတယ်။
ဒီရောဂါ အကူးစက်ခံရသူ ခြေရာကောက်တဲ့ COVID Tracking Project က စာရင်းကောက်ယူခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်မှာ အင်္ဂါနေ့ကလည်း တရက်အတွင်း အကူးစက်ခံရသူကလည်း ၁ သိန်း ၃ သောင်းကျော် (၁၃၆,ဝဝဝ) ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရောဂါနဲ့ ဆေးရုံတင်ခဲ့ရသူပေါင်းက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ ၆ သောင်းခွဲကျော် ရှိပြီး အင်္ဂါနေ့ကတော့ ၆ သောင်းကျော်ရှိနေသလို သေဆုံးရသူကလည်း ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ ထောင့်ငါးရာနီးပါး ရှိနေတာပါ။ ၇ ရက်အတွင်း ပျမ်းမျှ သေဆုံးသူ အရေအတွက်က တထောင်ကျော် ဖြစ်နေပါတယ်။
Johns Hopkins တက္ကသိုလ် ကကောက်ယူတဲ စစ်တမ်းမှာတော့ ကြာသပတေးနေ့မှာ ဒီရောဂါအကူစက်ခံရသူဟာ ကမ္ဘာတလွှားမှာ ၅၂ သန်းခွဲကျော်ရှိပြီး အမေရိကန်ကတော့ ဆယ်သန်းခွဲ ကျော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ သေဆုံးရသူကလည်း ကမ္ဘာတလွှား ၁.၂ သန်းကျော်နဲ့. အမေရိကန်မှာက ၂ သိန်းခွဲနီးပါးနဲ့ အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အခုအချိန်မှာ COVID-19 နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အနေထားဟာ သေရေးရှင်ရေးတမျှ အရေးကြီးတဲ့ အထားကို ရောက်နေပြီလို့ အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော် ဥက္ကဌ Nancy Pelosi က ကြာသပတေးနေ့မှာ သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
“ဒါဟာ အနီရောင်အဆင့် သတိပေးချက်ဖြစ်ပြီး သိပ်ကို အရေးကြီးတဲ့ အနေထားကို ရောက်နေတဲ့ အတွက် အားလုံး လက်တွဲလုပ်ဆောင်ကြဖို့ ပြောကြားလိုက်တာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ အချိန်အတော်ကြာကတည်းက လုပ်ဖို့ သင့်တဲ့ အလုပ်ဖြစ်ကြောင်း” လည်း ပြောပါတယ်။ ဒီရောဂါကြောင့် သေဆုံးမှုတွေ ဒီလောက်ဖြစ်နေတာကို သမ္မတ နဲ့ လွှတ်တော်ထဲက ရီပတ်ဘလစ်ကင်တွေက လျှစ်လျူရှုထားကြတယ်လို့လည်း ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တောင်ပိုင်းက Texas ပြည်နယ်မှာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ဒီရောဂါ အကူးစက်ခံရ သူ အရေအတွက် တသန်းကျော်သွားခဲ့တဲ့နောက် အခု ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်မှာပါ ကူးစက်သူ တသန်းလောက် ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။
ကနျ COVID ကူးစကျမှု တရကျအတှငျး ၁ သိနျးခှဲ နီးပါးရှိ
အမရေိကနျနိုငျငံမှာ ဗုဒ်ဓဟူးနကေ့ တရကျအတှငျး COVID-19 အကူးစကျခံရသူ အရအေတှကျ တသိနျးခှဲနီးပါး (၁၄၄ဝဝဝ) ဖွဈလာပွီး စံခြိနျတငျသှားပါတယျ။
ဒီရောဂါ အကူးစကျခံရသူ ခွရောကောကျတဲ့ COVID Tracking Project က စာရငျးကောကျယူခဲ့တာ ဖွဈပွီး အမရေိကနျမှာ အင်ျဂါနကေ့လညျး တရကျအတှငျး အကူးစကျခံရသူကလညျး ၁ သိနျး ၃ သောငျးကြျော (၁၃၆ဝဝဝ) ရှိခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီရောဂါနဲ့ ဆေးရုံတငျခဲ့ရသူပေါငျးက ဗုဒ်ဓဟူးနမှေ့ာ ၆ သောငျးခှဲကြျော ရှိပွီး အင်ျဂါနကေ့တော့ ၆ သောငျးကြျောရှိနသေလို သဆေုံးရသူကလညျး ဗုဒ်ဓဟူးနမှေ့ာ ထောငျ့ငါးရာနီးပါး ရှိနတောပါ။ ၇ ရကျအတှငျး ပမျြးမြှ သဆေုံးသူ အရအေတှကျက တထောငျကြျော ဖွဈနပေါတယျ။
Johns Hopkins တက်ကသိုလျ ကကောကျယူတဲ စဈတမျးမှာတော့ ကွာသပတေးနမှေ့ာ ဒီရောဂါအကူစကျခံရသူဟာ ကမ်ဘာတလှားမှာ ၅၂ သနျးခှဲကြျောရှိပွီး အမရေိကနျကတော့ ဆယျသနျးခှဲ ကြျောနပွေီဖွဈပါတယျ။ သဆေုံးရသူကလညျး ကမ်ဘာတလှား ၁.၂ သနျးကြျောနဲ့. အမရေိကနျမှာက ၂ သိနျးခှဲနီးပါးနဲ့ အမြားဆုံးဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ အခုအခြိနျမှာ COVID-19 နဲ့ ပတျသကျပွီး အမရေိကနျနိုငျငံရဲ့ အနထေားဟာ သရေေးရှငျရေးတမြှ အရေးကွီးတဲ့ အထားကို ရောကျနပွေီလို့ အမရေိကနျအောကျလှတျတျော ဥက်ကဌ Nancy Pelosi က ကွာသပတေးနမှေ့ာ သတိပေးလိုကျပါတယျ။
“ဒါဟာ အနီရောငျအဆငျ့ သတိပေးခကျြဖွဈပွီး သိပျကို အရေးကွီးတဲ့ အနထေားကို ရောကျနတေဲ့ အတှကျ အားလုံး လကျတှဲလုပျဆောငျကွဖို့ ပွောကွားလိုကျတာပါ။ ဒါပမေယျ့ ဒါဟာ အခြိနျအတျောကွာကတညျးက လုပျဖို့ သငျ့တဲ့ အလုပျဖွဈကွောငျး” လညျး ပွောပါတယျ။ ဒီရောဂါကွောငျ့ သဆေုံးမှုတှေ ဒီလောကျဖွဈနတောကို သမ်မတ နဲ့ လှတျတျောထဲက ရီပတျဘလဈကငျတှကေ လြှဈလြူရှုထားကွတယျလို့လညျး ဝဖေနျလိုကျပါတယျ
အမရေိကနျပွညျထောငျစု တောငျပိုငျးက Texas ပွညျနယျမှာ ဗုဒ်ဓဟူးနကေ့ ဒီရောဂါ အကူးစကျခံရ သူ အရအေတှကျ တသနျးကြျောသှားခဲ့တဲ့နောကျ အခု ကယျလီဖိုးနီးယား ပွညျနယျမှာပါ ကူးစကျသူ တသနျးလောကျ ဖွဈလာခဲ့တာပါ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်း ကိုဗစ်ကူးစက်မှု စံချိန်တက်
မြန်မာ ကိုဗစ်ကာလ အရေးပေါ်ထောက်ပံ့ကြေး ထပ်ပေးနေ
ရွေးကောက်ပွဲလွန်ကာလ ကိုဗစ်ကူးစက်မှု တိုးနိုင်ခြေ ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေ